Soomaalidu waa ganacsatada mustaqbalka ee Sweden | Somaliska
Sidaas waxaa qaba Awad Hersi oo ka mid ah maamulka magaalada Stockholm "Soomaalida waxaa lala xiriirayaa ganacsiga iyo sharafta balse nasiib daro Soomaalida Sweden waxaa lala xiriirayaa sawir khaldan in ay yihiin dadka iska fadhiya taasoo caqabad ku ah ganacsatada Mustaqbalka" ayuu ku dooday Awad Hersi mowduuc uu ku qoray PolitikerBloggen.se Soomaalida waa dad leh isbirit ganacsi kaasoo ay la tagaan meelkasta oo ay joogaan, tusaale ahaan waxaa tan laga dheehan garaa firfircoonida Soomaalida ku dhaqan Maraykanka iyo Ingiriiska. Soomaalida wadamadaas ku nool ayaa abuuray ganacsiyo kala duwan haddii ay ahaan lahayd Tafaariikhda, xawaaladaha iyo shirkado bixiya adeega. Soomaalida ku nool Emiraaka carabta iyo Afrika ayaa hawl galiya shirkado yaryar iyo kuwa waaweyn sida diyaaraha, isgaarsiinta, hoteelada iyo gaadiidka. Waayo aragnimada ganacsi ee Soomaalida iyo xiriirkooda caalamka ayaa dhaliya hal abuur ganacsi oo faaiido leh. Nasiib daro hal abuurka ganacsiga Soomaalida ma ahan mid ka muuqda Sweden, Awad Hersi ayaa ku doodaya in Sweden aysan iska lumin enerjiga ganacsi ee Soomaalida. Bulshada Sweden waa in ay fahantaa caqabada hortaagin ganacsatada Soomaalida, oo waa in tusaale laga qaataa horumarka ay sameeyeen ganacsatada Soomaaliyeed ee wadamada kale. Dhibaatooyinka haysta ganacsatada Soomaalida waxaa ka mid ah sidii ay ku heli lahaayeen maalgalin asagoo Awad Hersi qaba in sababa kala duwan dartood aysan hay'ada bixiya maalgalinta iyo Soomaalida uusan xiriir fiican ka dhaxeyn. Waa in la taageeraa dadka firfircoon ee doonaya in ay ganacsiga sameeyaan. Waa in la badiyaa xiriirka ka dhaxeeya bulshada ganacsatada Swedishka iyo kuwa Soomaalida taasi waxay abuuri kartaa faaido dhinac kasta ah. Awad Hersi waa xubin ka mid ah maamulka magaalada Stockholm kaasoo ku matala xisbiga Miljöpartiet.
Sidaas waxaa qaba Awad Hersi oo ka mid ah maamulka magaalada Stockholm “Soomaalida waxaa lala xiriirayaa ganacsiga iyo sharafta balse nasiib daro Soomaalida Sweden waxaa lala xiriirayaa sawir khaldan in ay yihiin dadka iska fadhiya taasoo caqabad ku ah ganacsatada Mustaqbalka” ayuu ku dooday Awad Hersi mowduuc uu ku qoray PolitikerBloggen.se
Soomaalida waa dad leh isbirit ganacsi kaasoo ay la tagaan meelkasta oo ay joogaan, tusaale ahaan waxaa tan laga dheehan garaa firfircoonida Soomaalida ku dhaqan Maraykanka iyo Ingiriiska. Soomaalida wadamadaas ku nool ayaa abuuray ganacsiyo kala duwan haddii ay ahaan lahayd Tafaariikhda, xawaaladaha iyo shirkado bixiya adeega.
Soomaalida ku nool Emiraaka carabta iyo Afrika ayaa hawl galiya shirkado yaryar iyo kuwa waaweyn sida diyaaraha, isgaarsiinta, hoteelada iyo gaadiidka. Waayo aragnimada ganacsi ee Soomaalida iyo xiriirkooda caalamka ayaa dhaliya hal abuur ganacsi oo faaiido leh. Nasiib daro hal abuurka ganacsiga Soomaalida ma ahan mid ka muuqda Sweden, Awad Hersi ayaa ku doodaya in Sweden aysan iska lumin enerjiga ganacsi ee Soomaalida.
Bulshada Sweden waa in ay fahantaa caqabada hortaagin ganacsatada Soomaalida, oo waa in tusaale laga qaataa horumarka ay sameeyeen ganacsatada Soomaaliyeed ee wadamada kale. Dhibaatooyinka haysta ganacsatada Soomaalida waxaa ka mid ah sidii ay ku heli lahaayeen maalgalin asagoo Awad Hersi qaba in sababa kala duwan dartood aysan hay’ada bixiya maalgalinta iyo Soomaalida uusan xiriir fiican ka dhaxeyn.
Waa in la taageeraa dadka firfircoon ee doonaya in ay ganacsiga sameeyaan. Waa in la badiyaa xiriirka ka dhaxeeya bulshada ganacsatada Swedishka iyo kuwa Soomaalida taasi waxay abuuri kartaa faaido dhinac kasta ah.
Awad Hersi waa xubin ka mid ah maamulka magaalada Stockholm kaasoo ku matala xisbiga Miljöpartiet.
Rag Sweden degan oo lagu xiray denmark